Teknika famoronana ampiharina amin'ny endrika anatiny | Famoronana an-tserasera
«DSC05774 SF Decorator Showcase Teenage Girl's bedroom avy amin'i Pamela Weiss» avy amin'i godutchbaby dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Te hampivelatra ny atiny famoronana famoronana rehetra ve ianao? Tsy azonao antoka hoe aiza no hanombohana?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka teknika vitsivitsy afaka manampy anao izahay.
1 Ny teknika 60-30-10
2 Teknika ho an'ny fijanonana kely
Ny teknika 60-30-10
Ity lalàna ity dia hahafahantsika mamorona loko mandanjalanja ao amin'ilay efitrano haingoinay. Voalohany indrindra dia ilaina ny misafidy ireo loko tiantsika hampiasaina. Ho an'ity dia afaka mampiasa paleta miloko isika.
Fitaovana tena ilaina dia ny Adobe Color, izay niresaka taminay a lahatsoratra teo aloha. Ity programa ity dia hahafahantsika mamorona fitambarana maro. Ka andao hifidy izay tena tiantsika indrindra, amin'ny fandinihana ny vokatry ny loko eo amin'ny toe-tsaina.
"Kodiarana miloko" avy amin'i Viktor Hertz dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Vantany vao voafidy ny paleta, dia hiezaka ny hampiasa ny lalàna 60 - 30 - 10 izahay. Ny isa dia maneho ny isan-jato izay hampiasantsika ny loko tsirairayAmin'izay fomba izay 60% dia hisolo tena ny feon'ny efitrano. Izy io no loko lehibe indrindra ary ilay hampita ny fihetseham-po indrindra, noho izany ilaina ny mifidy tsara azy. Manoro hevitra anao ny hisafidy feo tsy miandany na maivana.
Ny 30% dia solontenan'ny loko hafa, izay hanome mifanohitra amin'ny voalohany. Ohatra, afaka mampiasa azy amin'ny rindrina sy amin'ny karipetra isika.
10% no lokon'ny pitsopitsony kely ary hameno ny roa hafa. Cushion, sary hosodoko ...
Teknika ho an'ny fijanonana kely
Raha kely ny efitrano, dia misy teknika azontsika ampiasaina hitsitsiana toerana: ampiasao takelaka translucent, ambain ho fizarazarana, varavarana misosa, fitaratra, terraces akaiky, manipy partitions, manana talantalana avy amin'ny gorodona ka hatrany amin'ny valindrihana, mandoko ny efitrano misy loko maivana, mampiasa ny banga eo ambanin'ny tohatra, manaova fandroana fa tsy fandroana ... ary snsetera lava.
Ho fanampin'izay, misy teknika maro ampiharina amin'ireo habaka tianao haingo: varavarankely fivarotana, fivarotana, valiha ...
Ary ianao, inona no andrasanao hamoaka ny fahaizanao mamorona sy manaingo ireo efitrano ao an-tranonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Teknika famoronana ampiharina amin'ny endrika anatiny